मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता समस्याका लागि अचूक औषधी हुन्छ बाँसको तामा - नेपाली खोज
कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे छ खर्ब लाग्ने
४५ वर्षअघि देखि अन्न नखाएका नेपाली बाबाको निधन, पशुपतिमा अन्त्येष्टि
१७ seconds अगाडि
प्रदेश सरकारले शिर ठाडो हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री पौडेल
घना जंगलमा राती १२ बजे चिहान खनेर मान्छे निकाल्ने झाक्रीलाई गाउमा भब्य सम्मान, गाउलेहरु खुसीले गदगद भए (भिडियो सहित)
कुन बेला महिलाहरू सबैभन्दा धेरै चाहन्छन्
मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता समस्याका लागि अचूक औषधी हुन्छ बाँसको तामा
बाँसको तामाको तपाईं अचार, तरकारी वा सुप, के खानुहुन्छ रु जसरी खाए पनि यो स्वादिष्ट त हुन्छ नै यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत फाइदा पुर्याउँछ । तामा सेबनले मुटुको लागी राम्रो फाइदा गर्छ । खासगरी, तामे, निगालो, चोया र भालुबाँस तामाका लागि उपयुक्त हुन्छ । अंग्रेजीमा बेम्बो सुट भनेर चिनिने यो सब्जी क्यानमा प्याकिङ गरिएको समेत पाइन्छ । जुन स्थानीय तामाभन्दा महँगो हुन्छ ।
तामाबाट विभिन्न परिकार बनाउछ सकिन्छ । बाँसको टुसालाई सीधै तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, तामाको अचार मेसो पनि लोकप्रिय छ । तामा हालेर मासु पकाउँदा थप स्वादिष्ट हुन्छ । खानाको सुरुवाती अर्थात् एप्पिटाइजर सलादका रूपमा समेत यो उपयोगी छ ।
विदेशीले भने तामाको सुप धेरैथरीका बनाउँछन् । नेपालमा आलु–बोडी–तामाको तरकारी बढी प्रचलित छ । यो अत्यन्तै मिठो हुन्छ । बाँसको तामा पनि एक किसिमले गुन्द्रुक खाँदे जसरी नै बनाइन्छ । सर्वप्रथम, तामे बाँसको कलिला मुन्टा भाँचेर ल्याउने र स–साना टुक्रा बनाउने । केही समय घाममा सुकाएर मोल्ने अनि सफा माटोको भाँडो वा डिब्बामा हावा नछिर्ने गरी बन्द गरेर राखिदिने । यसरी जति लामो समय राख्यो, त्यति नै तामामा अम्लीयपन बढ्छ ।
तपाईं एकदमै दुब्लो, पातलो र कमजोर हुनुहुन्छ, यी चीज यसरि खानुस् त्यसपछि ५ दिनमै हुनेछ चमत्कार
स्वस्थ र लामो कपालका लागि यसरि गर्नुस् अण्डाको प्रयोग
युरिक एसिड बढ्यो ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार !
राष्ट्रकवि घिमिरेको निधनमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा
हुम्लामा चिसोले जनजीवन कष्टकर
बागलुङमा खर्च गर्नेलाई होटलमा, अन्यलाई सरकारी क्वारेन्टिनमा